राष्ट्रपति १६ करोडको गाडी माग्ने-भूकम्प पीडित पानि हिलोको आहाल र पाल मा बस्ने ? – khambuwan.org
Posted on २५ असार २०७४, आईतवार २१:२२
भूकम्प पीडितले हिउँद/बर्षा टहरामै विताएको पनि तीन बर्ष वितिसक्यो । सरकारले पुनःनिर्माणको लागि दिने भनेको राहत रकम कतिपयले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन् त कसैले पहिलो किस्ता पाएर पनि दोस्रो किस्तामा अड्किएका छन् । पहिलो किस्ता लिएर घर बनाउन थालेका भुकम्प पीडितहरुले दोस्रो किस्ता नपाएर बिचमै घर बनाउन रोकिनुको पीडा त छँदै छ ।
सप्तरीका यी बाढी पीडितको अबस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको टोलि पनि सप्तरी नपुगेको होईनन् । त्यसो प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राहतको घोषणा नगरेका पनि होईनन् । सप्तरीका बाढी पीडितलाई प्रधानमन्त्री देउवाले टहरा निर्माणका लागि २५ हजार अनुदान र व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा पनि गरे । तर प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको पैसा बाढी पीडितले कहिले पाउँछन् त्यो पत्तो छैन । पीडितलाई के थाहा छ भने–अहिले परिवारको मुन्टो लुकाउने ओत छैन ।
योबाट पनि प्रष्टै हुन्छकी देशका ठूला निकायका व्यक्तिहरु जनतालाई पीडाको आहालमा सुताएर विलासी जीवन विताउने तरखरमा छन् । भूकम्प र बाढीले थिलथिलो बनाएको जग्गामा एकसरो त्रिपालको भरमा पूर्वी सिन्धुपाल्चोकदेखि मध्ये तराईसम्मका जनता कहरमा बाँचिरहेका छन् । तर हाम्रा देशकी राष्ट्रपति १६ करोड रुपैयाँ बराबरको विलासी गाडीमा घुमफिर गर्ने सपनाका लागी सरकारलाई जवर्जस्ति गरिरहेकी छिन्। मानौं १६ करोडको गाडी चढेर भुकम्प र बाढी पीडितको घर–आँगनमा डुल्न आउँदैछिन् ।
एकातिर भूकम्प पीडितले राहत नपाइरहँदा अर्कोतिर तराई बाढीले डुबाईरहँदा पक्कैपनि केहि राहतको पर्खाइमा रहेका जनतालाई आहाल र पालमा सुताएर राष्ट्रपति भण्डारीले १६ करोडको गाडी किन्न पैसा माग्न सुहाउँछ ? यदि राष्ट्रपतिलाई जनताका माया छ भने तराईमा विपद् परिरहँदा करोडौंको गाडी चढ्न किन खोज्छिन् ?
Previous article इन्डोनेसियामा ‘मिनी लुम्बिनी’ बनाउन प्रस्ताव
Next article भेडाको ब्यापार र नेपाल
Total views : 109440